Nyocha ndị ahịa Google maka Nnyocha Ahịa na Afọ ojuju Weebụ | Martech Zone
Nyocha ndị ahịa Google maka Nnyocha Ahịa na Afọ Ojuju nke Weebụ
Google ugbu a na-enye Google Consumer Surveys maka Market Market na ndị nwe weebụsaịtị. Adịghị m nnukwu onye na-akwado ụlọ ọrụ na-emepe nyocha nke aka ha, ọ bụ nnukwu ọrụ maka ụlọ ọrụ ọgụgụ isi ahịa ndị na-enyocha ma mepụta atụmatụ iji weghara ozi ziri ezi. Otu onye na-ajụ di na nwunye ajụjụ n'ụdị nwere ike ime ka ọchụnta ego ha baa ọgaranya naanị n'ihi etu ha si ajụ ya ma nweta azịza ya. Kpachara anya.
Nyocha ndị ahịa Google bụ ngwa nyocha ngwa ngwa, ọnụ ọnụ, na nke ziri ezi nke na-enyere gị aka ịme mkpebi azụmaahịa mara nke ọma site na ịjụ ndị ọrụ ịntanetị ajụjụ nyocha. Ndị ọrụ na-ajụ ajụjụ nyocha iji nweta ọdịnaya dị elu na ntanetị yana ndị na-ebipụta ọdịnaya na-akwụ ụgwọ ka ndị ọrụ ha na-aza. Google na - achikota onu na aka ya na azịza ya site na intaneti di nfe.
Maka ndị nwe weebụsaịtị - A na-etinye nyocha afọ ojuju n'efu na weebụsaịtị gị ka ị wee nwee ike ị nweta nzaghachi mgbe ọ kachasị. Iji jiri nyocha afọ ojuju, detuo ma mado mpempe koodu ahụ na ibe ịchọrọ ị nyocha ndị ọrụ gị. Ha na-enye ihe nyocha afọ ojuju kwa ọnwa n'efu, ị nwere ike hazie ajụjụ maka naanị 1 pasent kwa nzaghachi.
Maka Nnyocha Ahia - Mepụta nyocha na nkeji oge ma nweta nso nso Google-kwadoro akụkọ, eserese, na nghọta. Nweta ihe ndekọ ọnụ ọgụgụ, nsonaazụ dị mma na ọnụ ọgụgụ sitere n'aka ndị mmadụ n'ezie, ọ bụghị akụkụ ndị na-enweghị isi.
Create mepụtara nyocha ịntanetị iji nweta nghọta ndị ahịa.
Ndị mmadụ na-ajụ ajụjụ iji nweta ọdịnaya adịchaghị.
A na-akwụ ndị nkwusa ụgwọ mgbe ndị ọbịa na-aza ha.
Ga-agakọ nke ọma ma nyochaa data.
I nwekwara ike soro nzaghachi biweekly ma ọ bụ kwa ọnwa maka usoro nyocha.
Nye ọnụahịa: Debe ihe nlele nke ndị nnọchi anya US, Canada, ma ọ bụ UK maka $ 0.10 kwa nzaghachi ma ọ bụ $ 150.00 maka nzaghachi 1500 (akwadoro maka mkpapụta ọnụ ọgụgụ). Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịwepụta ihe nlele ahụ na igwe mmadụ, ọ bụ $ 0.50 kwa nzaghachi.
Tags: nyocha ndị ahịaNyocha ndị ahịa googlenyocha googlenyocha
Onye na-elele Mgbasa ozi Banner